KAOMININA NOSYBE VOHEMAR : Mangataka ny hanesorana ilay dokotera voalaza fa nanolana
Mangataka ny fanesorana an’ilay Dokotera voalaza fa nanolana vehivavy mpanjifa tao aminy ny Ben’ny tanànan’ny kaominina Nosy-Be Distrikan’i Vohemar ankehitriny. 29 août 2017
Nanamafy ihany koa izy fa tsy azo lazaina amin’ilay mpitsabo tokony hisolo azy ny tranga nisy tao an-toerana satria baraka ho an’ny kaominina ny zava-nisy. Voalaza fa nanomboka tamin’ny nahafantaran’ny mponina ao an-toerana io tranga io dia nihena ny mpanjifa tonga mitsabo tena ao amin’ity hopitaly iasany ity.
Fantatra ankehitriny fa efa in-droa ny fihetsika mamoafady nataon’ity mpitsabo voatonontonona ho mpanolana vehivavy ity. Efa nitrangana fanolanana vehivavy iray tonga nitsabo tao aminy talohan’ity tranga iray izay mampisavorovoro ireo tompon’andraiki-panjakana any an-toerana izao, araka ny loharanom-baovao. Tsy nitory ilay vehivavy voalohany nokasainy haolana io satria tafatsoaka ary tsy sahy nilaza tamin’olona fa raha vao naheno ny fitarainan’ilay farany vao nampandre ny lehiben’ny fokontany tao an-toerana.
Fantatra ihany koa fa hopitalim-panjakana ny toerana iasan’ity voalaza fa nahavanon-doza ity ary roa ihany izy ireo no mpitsabo ao. « Mampalahelo sy maha menatra ny zavatra nisy teto aminay fa tsy maintsy hoesorina amin’ny asany ihany io dokotera io », hoy ny Ben’ny tanànan’i Nosy-Be.Raha tsiahivina dia voalaza fa nanolana renim-pianakaviana iray ity mpitsabo miasa amin’ny hopitalim-panjakana ity, ka nitory tamin’ny lehiben’ny fokontany sy ny Ben’ny tanàna ilay ramatoa milaza fa lasibatra.
Nitady tsy hiditra lalina tamin’io raharaha io anefa ireo tompon’andraikitra roa ao an-toerana ireo noho ny fahatahorana ny tsy hisian’ny dokotera hitsabo satria ambanivolo loatra ny toerana. Tsy nanaiky anefa ilay niharam-boina ka naparitany teo an-tanàna ny nahazo azy ary dia naheno avokoa ny ankamaroan’ny mponina tao amin’io kaominina io ka niafara amin’izao fandraisan’andraiktry ny Ben’ny tanàna izao ihany.